မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသည့် ကိုရီးယား လုပ်ငန်းရှင် အများအပြားရှိနေ၊ မြေနေ? - Yangon Media Group
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသည့် ကိုရီးယား လုပ်ငန်းရှင် အများအပြားရှိနေ၊ မြေနေ?
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသည့် ကိုရီးယားလုပ်ငန်းရှင်အများအပြားရှိနေပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြေနေရာ၊ လုပ်သားအင်အား စသည့်အားသာချက်များနှင့် ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ ခေတ်မီနည်းပညာများ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုအတတ်ပညာများ ပေါင်းစပ်လုပ်ကိုင်ပါက အောင်မြင်နိုင်မည်ဟု ကိုရီးယား-အာရှစီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအသင်းဥက္ကဋ္ဌ Dr.Lee Nam Kee က ဇွန် ၁၉ ရက်က ပြောသည်။
”မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံချင်တဲ့ ကိုရီးယားလုပ်ငန်းရှင်တွေ အမြောက်အမြားရှိပါတယ်။ မြေနေရာ၊ လုပ်သားအင်အားစတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အားသာချက်တွေကို ကိုရီးယားရဲ့ခေတ်မီနည်းပညာတွေ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုအတတ်ပညာတွေနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်ရင် ကျွန်တော်တို့လုပ် ငန်းအောင်မြင်မှာ အသေအချာပါပဲ”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ဆိုးလ်မြို့အခြေစိုက် ကိုရီးယား-အာရှစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအသင်း (Korea-Asia Economic Cooperation Associa- tion- KOAECA) နှင့် မြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်တို့အကြား စီးပွားဆက်ဆံရေးမြှင့်တင်ရန် နားလည်မှုစာချွန်လွှာကို ဇွန် ၁၉ ရက်ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ရာ ယင်းအခမ်းအနား၌ ပြော ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာနှင့်ကိုရီးယားစီးပွားရေး အသိုက်အဝန်းများအကြား အကျိုးတူစီးပွားရေးပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရေး၊ နှစ်ဖက်လုပ်ငန်းရှင်များ ချိတ်ဆက်တွေ့ဆုံရေးနှင့် နှစ်ဖက်စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများအား အပြန်အလှန်ဝေမျှနိုင်ရေး စသည့်လုပ်ငန်းများ၌ လက်တွဲ ဆောင်ရွက်ရန် နားလည်မှုစာချွန်လွှာကို ဇွန် ၁၉ ရက်က ရန်ကုန်မြို့ ရှိကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်၌ ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါနားလည်မှုစာချွန်လွှာအရ ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်နှင့် ကိုရီးယား-အာရှစီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအသင်းတို့သည် နှစ်နိုင်ငံအကြားစီးပွားဆက်ဆံရေးမြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်၍ နှစ်ဖက်လုပ်ငန်းရှင်များ၏စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ခရီးစဉ်များစီစဉ်ခြင်း၊ စီးပွားရေးပညာရှင်များ အပြန်အလှန်စေလွှတ်ခြင်း၊ စီးပွားရေးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပခြင်းတို့ကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး နှစ်ဖက်လုပ်ငန်းရှင်များ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုန် သွယ်မှုလုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်ကူညီဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်မင်းဝင်းက ”ကိုရီးယားနိုင်ငံက တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုရှိတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကို ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ ကိုရီးယားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကတစ်ဆင့် နည်းပညာ၊ အတတ်ပညာတွေရယူပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျွမ်းကျင်လုပ်သား တွေ မွေးထုတ်ပေးနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။ ယင်းနားလည်မှုစာချွန်လွှာသည် ဇွန် ၁၉ ရက်မှစတင်၍ အသက်ဝင်ကာ သုံးနှစ်ကြာသက်တမ်းရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
မန္တလေး တောင်တော် ရင်ပြင်တော်ပေါ်၌ လုံခြုံရေးပိုင်း စောင့်ကြည့်ရန် CCTV ကင်မရာများကို အဆင့်မြှ?
သီတဂူဆရာတော်ကြီး သက်တော် (၈၂)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ ပထမရက်တွင် သီလရှင်အပါး ၁ဝဝဝ အား ဆွမ်းကြီ??